Ciidamada Itoobiya oo Xaflad loogu sameeyay Magaalada Baladweyne. +Sawirro « AYAAMO TV
Ciidamada Itoobiya oo Xaflad loogu sameeyay Magaalada Baladweyne. +Sawirro
806 Views Date February 18th, 2014 time 12:33 pm
Wararka ka imaanaya Magaalada Baladweyne ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in munaasabadaasi lagu soo dhaweynayay Ciidamada Dowlada Itoobiya ee ku biiray howlgalka AMISOM ee Gudaha Dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay Xarunta Ceeljaale ee Duleedka Magaalada Baledweyne.
Xafladan soo dhaweynta ah ayaa waxaa ka qeyb galay Maamulka Gobolka Hiiraan kan Degmada Beladweyne Odayaasha Dhaqanka Dhalinyarada Qeybaha Bulshada ee Magaalada ayaa bilowgii Munaasabada lagu saaray Calamada Dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo kan AMISOM.
Waxaa munaasabadaas furay oo ka hadlay Taliye xigeenka Saktarka 4aad ee Ciidamada AMISOM ee Gobolada Hiiraan iyo Galgaduud Col. Maariya, waxaana uu sheegay inay ku faraxsanyihiin ku biirirsta Ciidamada Itoobiya Howlgalka AMISOM, isagoo Carabka ku adkeeyay in dhawaan Howlgal lagu cirib tiri doono Kooxaha Agagaxisada Shabaab lagu fulin doono Gobolka, kana codsaday Maamulka iyo Bulshada inay gacan buuxda ku siiyaan.
Taliyaha Ciidamada AMISOM ee Gobolka Hiiraan Col. C/raxmaan Cabdi oo isna munaasabada ka hadlay ayaa marka hore u mahadceliyay Ciidamada Itoobiya ee ku soo biiray AMISOM taasoo uu sheegay in uu soo dhaweeynayo waxuuna dhanka kale fariin u diray Kooxda Alshabaab in ay isaga baxaan deegaanada fara kutiriska ah ee ay ka joogaan Gobolka in ay isaga baxaan maadaama aysan u bacbacdhigi karin cududan ciidan ee isugu jiray ciidamada Xoogga Dalka iyo kuwa AMISOM ee Dalalka Jabuuti iyo Itoobiya.
Dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka Gobolka Hiiraan ahna ku-simaha Guddoomiyaha Gobolka Maxamed Ibraahim ayaa si weyn u soo dhaweeyay Ciidamada Dalka Itoobiya ee ku soo biiray AMISOM wuxuuna ka codsaday in si dhaqso ah looga xureeyo kooxada Argagaxisada ee Shabaab deegannada ay gobolkaasi kaga sugan yihiin.